Onye ọ bụla Kpọrọ Mgbasa Ozi ... Mgbasa Ozi Na-akwụ Stillgwọ Ka Na-arụ Ọrụ? | Martech Zone
Fraịde, Ọktọba 9, 2015 Monday, October 12, 2015 Douglas Karr
Enweela ọtụtụ mkparịta ụka n'ịntanetị banyere mkpọsa mgbasa ozi. Twitter enwebeghị ihe ịga nke ọma na ngwugwu mgbasa ozi ya. Facebook nwere ihe ịga nke ọma, mana ndị na-azụ ahịa na-ada mbà na mgbasa ozi gbasasịrị ebe niile. Nnyocha a na-akwụ ụgwọ na-aga n'ihu ịchụpụ ego dị ịtụnanya… mana ọchụchọ na-ebelata dị ka ụzọ ndị ọzọ maka ịchọ na ịchọta ozi na ntanetị na-eto eto.
N'ezie, ọ bụrụ na ị jụọ ndị ahịa (na TechnologyAdvice na Unbounce mere), ị ga-eche na ha abaghị uru:
38% nke ndị zaghachiri kwuru na ha a attentiona ntị ka mgbasa ozi n'ịntanetị.
79% nke ndị zaghachirinụ kwuru na ha fọrọ nke nta ịpịla ịntanetị.
71% nke ndị zaghachiri kwuru ahaziri iche na omume dabere na omume na-etinye aka ma ọ bụ na-akpasu iwe.
90% nke ndị zaghachirinụ kwuru na ọ dịghị mgbe ha mere a ịzụta nkwa mgbe ịpịrị na mgbasa ozi.
N'ezie, echiche ndị mmadụ mgbe a jụrụ ha nwere ike ịdịtụ iche na nsonaazụ ị rụzuru. Ọ bụrụ n ’ị chere na mgbasa ozi na-anwụ ma ọ bụ na ịchọrọ ka ha laa, chere ruo mgbe ịmalitere ịkụ mgbidi ad ma kwado ọdịnaya niile. Ọ ga-akara m mma karịa ịnwe mgbasa ozi doro anya, dị mkpa karịa mkpọsa sneaky!
Mgbasa ozi a na-akwụ n'ịntanetị nwere aha agwakọta. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ewere ya dị ka akụkụ bụ isi nke usoro azụmaahịa ha, mana enwere ọtụtụ ndị nkatọ. Y’oburu na ichoro webusaiti, ichota otutu otutu akwukwo nke n’enye onyinye kacha mma iji nweta clicks na ntughari, otutu otutu ndi mmadu na-achota ihe ojoo nke ahia ahia.
Mgbasa ozi n'ịntanetị ọ na-arụ ọrụ?
Isi okwu bụ na ịdị irè nke mkpọsa gị nwere ike ịdịwanye mma karịa oge na ụfọdụ ndụmọdụ ebe a na infographic a. Agbanyeghị, okwu bụ isi banyere okwu ROI. Ọbụna na obere obere-pịa ọnụego na ọnụego mgbanwe, atụmatụ ahụ ọ ka na-aba uru? O doro anya na ị ga-achọ ihe omnichannel na inbound atụmatụ iji mee ka ọnụ ọgụgụ dị elu na ibelata ụgwọ kwa Pịa; n’agbanyeghi, mgbasa ozi naanị ya nwere ike ịba uru dị egwu. Otu onye na-apị ha, nri?
Download akụkọ zuru ezu site na TechnologyAdvice na Unbounce, Ọmụmụ: Mgbasa ozi a na-akwụ n'ịntanetị Na-arụ ọrụ na 2015? ịmụta ebe mgbasa ozi n'ịntanetị nwere ohere maka imeziwanye na otu esi ebuli mgbasa ozi dijitalụ gị maka itinye aka na ntụgharị.
Tags: gosipụta mgbasa oziakwụ ụgwọ mgbasa oziakwụ ụgwọ mgbasa ozi ọha na ezekwuo ugwo na mgbasa ozippc mgbasa oziNtuziaka Technologyadịghị ama